XOG Ilhan Cumar Saxiibadeeda oo Bilaabay Olole Ka Dhan Imaraadka iyo Israel Hiilo weyn Turkey iyo Iran - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG Ilhan Cumar Saxiibadeeda oo Bilaabay Olole Ka Dhan Imaraadka iyo Israel Hiilo weyn Turkey iyo Iran
Ilhan Cumar oo Ka Tirsan Koongarayska Mareykanka ayaa ku eedeysay maamulka Donald Trump inay adeegsanayaan heshiisyo Xiriir Wanaajin Ah oo laga soo shaqeeyay Bariga Dhexe si ay u “qariyaan heshiisyada iibinta hubka ee kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha”.
Ilhaan oo Waraysi Siisay wargayska todobaadlaha ah ee The Nation , ayaa sheegay in madaxweynaha la doortay Joe Biden “uu haysto fursad aad u weyn oo uu dib ugu celin karo” heshiisyada iyo in uu ka fogaado in uu dhinac ka raaco halganka gobolka ee u dhexeeya Iran iyo kuwa la tartamaya.
“Intii aan dhinac ka raaci lahayn koox kaligi taliyeyaal ah koox kale, waa inaan iska dhignaa meel aan ka simannahay labadoodaba, oo aan u oggolaanno inaan noqono dallaallo daacad ah, ilaalinaya nabadgelyadeenna qaran iyo danaheenna iyadoo la horumarinayo xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda,” ayay Tiri Ilhan Cumar.
Ka hor doorashadii madaxtinimada ee bishii Nofeembar, maamulka Trump wuxuu Xoojiyey heshiisyo taxane ah oo u oggolaaday Israel inay la Yeelato xiriir Imaaraatka, Baxreyn iyo Suudaan.
Ilhaan Cumar ayaa tilmaamay in heshiiskii Imaaraadku la galay Israa’iil kadib, maamulka Trump uu soo jeediyay in laga iibiyo Imaaraadka $ 23bn oo hub ah, oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka ee F-35.
Waxay ku eedeysay Trump inuu isku dayayo inuu sameysto isbaheysi militari oo ka dhan ah Iran isagoo iska indha tiraya xadgudubyada Sacuudiga ee Yemen, doorka Imaaraadka ee dagaalada sokeeye ee Liibiya iyo caburinta Bahrain ee codadka mucaaradka.Isagoo Trump Doonaya Inuu dalka Maraykanka Galiyo dagaal Iran Kana Baxay Dhamaan Heshiisyada Obama,Markaasi waa In laga Noqdaa Isagana Heshiiskiisa Ayey “Tiri Ilhan Cumar.
“Maxay uga dhigan yihiin heshiisyadan malaayiinta Falastiiniyiinta ah ee ku sii noolaanaya qabsashada militariga Israel?” Ayay tiri. “Halkii ay ka dhigi lahaayeen dowladnimo ama aayo-ka-tashi , waxay caadi ka dhigteen qabsashada Falastiin, waxayna nabada dhabta ah ka dhigeen Israel Burburinta Dhulka Falastiiniyiinta .”
Xalka laba gobol
Xildhibaan Ilhaan Waxay sii raacisay: “Iska indha tirka dhibaatada Falastiiniyiinta waxay ka hor imaaneysaa qiyamkeena aasaasiga ah… waa inaan dib u soo celino baaqii xalka laba dowladood oo leh xuquuq bini aadam oo buuxa iyo aayo-ka-tashi labada Israel iyo Falastiin Waa Inay dib ugu noqdaan dooda dadweynaha si deg deg ah. ”
Biden waxaa loo Arkaa Inuu Tageersan yahay Xiriirka Carabta iyo Israa’iil Balse Wuxuu kasoo Horjeeda Arimo Badan oo taasi Gundhig u Ah,Sida Hubka Imaraadka Laga iibinayo,Cadaadiska Iran Iyo Arinta Falastiin.
Guushii Trump ee sanadkii 2016 ayaa looga dabaaldegay Israa’iil, gaar ahaan garabka midig iyo dadka deggan degsiimooyinka sharci darrada ah ee Daanta Galbeed ee la haysto, kuwaas oo dareemay inuu dhinac la safan doono khilaafka.
Tan iyo markaas waxaa lagu eedeeyay inuu wiiqay suurtagalnimada xalka laba dowladood, oo markii horaba fure u ahaa siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan khilaafka, gaar ahaan inuu safaaradda Mareykanka ka raro Tel Aviv una raro magaalada Qudus, taasoo si wax ku ool ah ugu aqoonsatay magaalada lagu muransan yahay inay tahay caasimadda Israel.
Wuxuu ku adkaystay inuu riixayo heshiis nabadeed isagoo madaxweyne ah, kaas oo loo yaqaanay “heshiiskii qarniga”, laakiin qorshayaashiisii ​​ayaa burburay.
Xoghayaha arrimaha dibedda Trump, Mike Pompeo, wuxuu ku maqnaa socdaal sagootin ah wuxuuna jebiyey caadadii isagoo noqday xoghayihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee si rasmi ah u booqda degsiimda Israa’iil, sidoo kale booqday buuraha Golan Heights oo ay Israa’iil ka soo rartay Suuriya.
Sidoo kale wuxuu booqday Imaaraadka wuxuuna socdaalkiisa ku soo gabagabeyn doonaa Sacuudi Carabiya.
In kasta oo looga adkaaday doorashada , Trump wuxuu weli ku firfircoon yahay siyaasadda arrimaha dibedda ka hor inta aan la fileynin wareejinta awoodda waxaana lagu soo waramayaa inuu tixgeliyey weerarrada ka dhanka ah Iran .
Trump ayaa ruxay xiriirkii uu lalahaa Iran kadib markii uu ka baxay heshiiskii Nukliyeerka ee lala galay dowladii isaga kahoreysay, Barack Obama, si loo xadeeyo howlaha Nukliyeerka ee Iran, wuxuuna cunaqabateyn curyaamiyay dalka ku soo rogay.
Biden wuxuu sheegay inuu dib u furi doono wadiiqooyinkii diblomaasiyadeed ee Iiraan uuna dib uga mid noqon doono heshiiskii Nukliyeerka haddii Iiraan ay dib u bilawdo u hoggaansanaanta shuruudihiisii, oo ay bilowday inay jebiso ka dib bixitaankii Trump.
Wasiirka Sacuudiga: Waxaan taageersanahay caadi ka ahaanshaha xaalada … xiriirka aan la leenahay Turkigana waa mid wanaagsan